कति छ नेकपासँग सम्पत्ति, प्रचण्ड नेपाल समुहले लेख्यो बैंक खाता रो*क्का गर्न बैंकहरूलाई यस्तो पत्र – Onlines Time
कति छ नेकपासँग सम्पत्ति, प्रचण्ड नेपाल समुहले लेख्यो बैंक खाता रो*क्का गर्न बैंकहरूलाई यस्तो पत्र
January 1, 2021 January 1, 2021 onlinestimeLeaveaComment on कति छ नेकपासँग सम्पत्ति, प्रचण्ड नेपाल समुहले लेख्यो बैंक खाता रो*क्का गर्न बैंकहरूलाई यस्तो पत्र
कति छ नेकपासँग सम्पत्ति, प्रचण्ड-नेपाल समुहले लेख्यो बैंक खाता रोक्का गर्न बैंकहरूलाई यस्तो पत्र !
सरकारले कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशीले लगानी गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले सर्त राखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्त राखी कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय भएको हो । यससम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै छौं,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कान्तिपुरसँग भने । कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णयको विरोधमा किसान र निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०४९ प्रतिस्थापनका क्रममा समेत निश्चित सर्त राखी कृषिमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्न गृहकार्य भएको थियो । परम्परागत प्रणालीबाट कृषिकर्म गरिरहेका किसान र उद्यमीले भने विदेशी लगानीकर्ताले आफूहरूलाई विस्थापित गरिदिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विदेशी लगानीको साटो यहाँका किसान तथा उद्यमीलाई नै क्षमतावान् बनाउनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ । यसमा किसान आबद्ध राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाहरूले पनि साथ दिएका थिए । प्रमुख दलका शीर्ष नेताले समेत ‘कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नु हुन्न’ भन्ने धारणा राखेपछि ऐनमै विदेशी लगानी निषेध गरिएको थियो ।
अब बेलायतको नँया भा*इरस नेपालमा पनि, पहिले भन्दा झनै ठुलो ख*तरा, सबैलाई सचेत रहन यस्तो अनुरोध
लोडसेडिङ अन्त्य कुलमानले होइन, केपी ओलीले गरेका हुन् : पोखरेल
बाउछोरीको सम्बन्धबारे बोले सपना,अनावश्यक टिप्पणी भएको भन्दै पोखिन गुनासो कानुनी उपचार खोज्ने चेता”वनी
December 4, 2020 onlinestime
रमेश र कल्पनाको बिबाहबारे कल्पनाकी आमाले यस्तो भनिन् , तपाईंलाई कस्तो लाग्छ याे जाेडि?
रमेश प्रसाई र उनकी श्रीमतीको आश्रममा हास्दै पुगेकी अन्जु पन्त रु*दै फर्कीइन,अन्जुको गीतले नन्दा भाबुक
December 29, 2020 December 29, 2020 onlinestime